June 2015 – Ministry of Education in Puntland
June 30, 2015 / News
Wasiirka cusub ee Waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland oo la wareegay xilkiisii.
29/jun/2015- Wasiirka cusub ee waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Abshir Aw-Yuusuf Ciise ayaa maanta si rasmi xilkiiisii ugala wareegay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland. Munaasabad xil wareejin […]
June 28, 2015 / News
Wasiirka cusub ee Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland Abshir Aw-yuusuf Ciise oo soo gaaray Garowe.
27/jun/2015- Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Prof. Abshir Aw-yuusuf Ciise ayaa Maanta siweyn loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe ee caasimadda dawladda puntland. Wasiirka cusub ayaa kasoo kicitimay […]
Wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland oo maanta xilka wasaradda wareejiyay
23/jun/2015- Wasiirkii hore ee Wasarada Waxbarashada iyo tacliinta sare Cali Xaaji Warsame ayaa xilka ku wareejiyay wasiir ku xigeenka waxbarashada DR.Maxamed Cali Faarax maadama wasiirkii cusbnaa uusan wali soo gaarin […]
Wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo u soo xiray tababar Ha’yadda EAT u qabatay 70-dhalinyaro.
23/jun/ 2015- Wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland Dr.Maxamed Cali Faarax ayaa maanta 70-dhalinyaro ah magalada Garowe ugu soo gaba-gabeeyay tababar u socday mudo labo maalmood ah oo […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Garowe tababar ugu furtay 70 dhalinyaro oo xog uruurin kusoo sameeyay manhajka waxbarashada Puntland.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo Tabarbar u furtay Qayb ka mid ah Macalimiinta Puntland.
Maxaa laga Baran karaa Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland?
Wasaarada waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland oo xusaysa maalinta carruurta Africa
Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland oo bilowday sixitaanka Imtixaanka Dugsiyada sare.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare shir looga hadlayo hormarinta Waxbarashada farsamada gacanta oo iga Qayb galay Dalka Norway.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada puntland oo Tababar u furtay 270 Macalin oo ka kalayimi Dugsiyadda Sare ee puntland.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo ka qayb gashay Xaflad ay ku Qalin Jabinayeen Ardayda Dugsiyada Sare ee Gobolka Nugaal.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland oo Norwey uga qeyb galaya shir looga hadlayo farsamada gacanta.
Prof: Cabdi Ismaaciil Samatar oo la kulmay ardayda iyo maamulka kulliyada tababarka macalimiinta ee GTEC.